Nhau - Wood Glue Kuveza Pasina Nails Kana Screws
Wood Glue Kuveza Pasina Nails Kana Screw
Gluing chikamu chakakosha cheakawanda mapurani-akavakirwa mapurojekiti. Asi kusarudza yakanakisa huni glue kune rako chairo basa isn’t nguva dzose zviri nyore. Pano’s izvo iwe zvaunoda kuziva kusarudza kuti ndeapi huni glue inoshanda zvakanyanya kune yako projekiti.
Polyvinyl acetate (PVA) glue ndiyo yakajairika mhando yehuni glue. Rudzi urwu runosanganisira glues chena uye yero, kana izvo zvinowanzozivikanwa“muvezi’s guruu.” Iit inogona kushandiswa kune vakawanda – asi kwete ese – zvirongwa.
Viga glue inogadzirwa kubva kune zvigadzirwa zvemhuka. Inogona kuuya semvura kana semaguneti, maflakes, kana machira anoda kunyungudutswa mumvura. Inoda kudziirwa uye kuiswa nebhurasho, uye inosunga painotonhora.
Epoxy kazhinji inouya muzvikamu zviviri zvakasiyana: hardener uye resin. Izvo zvikamu zvakasanganiswa pamwechete kugadzira chemakemikari chisungo icho, kana chikaomarara, hachina mvura uye chinozadza maburi. Mamwe epoxies anononoka kupora, asi ndiwo mamwe maglue akasimba ehuni anowanikwa. Kana iwe uchitsvaga epoxy iyo’iri nyore kushandisa uye inoshanda kwazvo nehuni, edza Loctite Epoxy Kurumidza Set kana imwe yeLoctite’ma epoxies mazhinji ekushandisa kwese.
Polyurethane glues imhando yehunyoro-hwakaomeswa glue iyo inopupa sezvo ichiomesa kuita yakasimba kwazvo yekunamatira.
Kune mazhinji mapurani-akavakirwa mapurojekiti, Loctite PL Wood Wood, Paneling & Trim Adhesive isarudzo yakasimba.
Tarisa vhidhiyo iyi uye dzidza zvakawanda nezve kushandisa Loctite PL Premium Kuvaka Yekunamatira kune ako ese huni-based mabasa:
Polyvinyl acetate (PVA) glue inonamira uye inowanzo mhando mhando yehuni glue. Haina ruvara uye haina hwema. PVA glue inoisa zvakanakisa munzvimbo dzine mweya wakanaka kutenderera uye inoomesa nekukurumidza patembiricha yemukati Haasi ese maguru PVA asina mvura, saka tarisa chigadzirwa chako’s mirairo.
Kana iwe ukaenderera nekuchenjerera, sarudza chaiyo glues, uye uteedzere chaiyo nzira yekuomesa, kunamira huni zvinobudirira kunogona kunge kuri snap. Tevera aya matanho akareruka ekushandisa PVA glue uye nezvimwe zvinonamira.
1.Apply iyo glue kune ese ari maviri matanda ehuni kuti abatanidzwe. Shandisa jira kupukuta chero kurasira kana kufashukira nekukasira.
2.Paradzira huni glue kuva yakatetepa, inowirirana jasi uchishandisa brashi kana epurasitiki spreader.
3. Dhinda zvidimbu pamwechete. Iwe ungangoda kuchinjisa huso huchienda shure nekudzoka zvishoma kuti uve nechokwadi chekuti kunyange jasi uye kuburitsa chero mweya ungakonzera maburi.
4.Shandisa G-clamp kuchengetedza zvidimbu.
5.Rega zvidimbu zvakanamirwa zvigare zvisina kunetsekana kune yakakurudzirwa nguva yekutsimbirira yakapihwa nemirairo yechigadzirwa.
6.Sand kure chero chakaomeswa chakawandisa glue.